Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.3 Ny fanadihadiana diso tanteraka rafitra
Total fanadihadiana fahadisoana = solontena fahadisoana + refy fahadisoana.
Ny tombana azo avy amin'ny fanadihadihana samihafa dia matetika tsy tanteraka. Izany hoe, matetika dia misy fahasamihafana eo amin'ny tomban'ezaka azo avy amin'ny fanadihadiana (ohatra, ny habetsahan'ny salan'isan'ny mpianatra ao am-pianarana) ary ny sandam-pahaizana marina (ohatra, ny haavon'ny haavon'ny mpianatra amin'ny sekoly). Indraindray dia diso ireo fahadisoana ireo ka tsy manan-danja izy ireo, indraindray, indrisy fa indrisy fa mety ho be sy ho vokatr'izany izy ireo. Ao anatin'ny fiezahana hahatakatra, handrefesana ary hampihenana ny fahadisoana, ny mpikaroka tsikelikely dia namorona rafitra tokana miavaka ho an'ny fahadisoana mety hitranga amin'ny fanadihadiana samihafa: ny rafitra fanadihadiana tanteraka (Groves and Lyberg 2010) . Na dia nanomboka tamin'ny taona 1940 aza ny fampandrosoana io rafitra io, mieritreritra aho fa manolotra hevitra roa manan-danja ho an'ny fikarohana momba ny fanadihadiana amin'ny vanim-potoana nomerika.
Voalohany, ny rafitra fanadihadiana tanteraka dia manazava fa misy karazana fahadisoana anankiroa: fitongilanana sy fanavakavahana . Raha ny marina, ny fitongilan-draharaha dia fandehan-draharaha ary ny fahadisoana dia fahadisoana mety. Raha lazaina amin'ny teny hafa, alaivo sary an-tsaina ny famandrihana 1000 ny karazana fanadihadihana mitovy ary avy eo mijery ny fizarana ny tombanana avy amin'ireo rakitra 1.000 ireo. Ny fitongilanana dia ny fahasamihafana eo amin'ny tombam-bidin'ny fanombatombanana sy ny sandan'ny tena marina. Ny fahasamihafana dia ny fiovaovan'ireo vinavina ireo. Ny hafa rehetra dia mitovy, te hanana fomba fitsaboana tsy misy fitongilanana sy tsy fitoviana kely. Indrisy anefa, ho an'ny olana marobe maro, tsy misy fitoviana toy izany, tsy misy ny fomba fitsaboana madinidinika, izay mametraka ireo mpikaroka amin'ny toe-javatra sarotra ny manapa-kevitra ny fomba handanjana ny olana ateraky ny fitongilanana sy ny disadisa. Ny mpikaroka sasany dia manintona ny fomba fiasa tsy miangatra, fa ny fifantohan-tsaina iray monja amin'ny fitongilanana dia mety fahadisoana. Raha toa ka ny tanjonao dia ny maminavina ny sarany izay akaiky araka izay azo atao amin'ny fahamarinana (izany hoe, miaraka amin'ny fahadisoana kely indrindra), dia mety ho tsara kokoa ianao amin'ny fombafomba iray izay manana fitoniana madinika sy fitovozana kely kokoa noho ny amin'ny iray izay tsy misy fiheverana nefa manana variancia lehibe (endrika 3.1). Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny rafitra fanadihadiana tanteraka dia mampiseho fa rehefa mandinika ny fikarakarana fikarohana momba ny fanadihadiana, dia tokony hihevitra ny fiangarana sy ny disadisa.
Sary 3.1: Fifehezana sy fanavakavahana. Ny mpikaroka dia mety tsara amin'ny fikarakarana tsy misy fitoviana. Raha ny tena marina, matetika izy ireo dia mila mandray fanapahan-kevitra izay mametraka fifanakalozana eo amin'ny fitongilanana sy ny disadisa. Na dia maniry ny fomba fiasa tsy miangatra aza ny mpikaroka sasany, indraindray ny paikady madinika, ny fitsaboana madinika dia mety manome tombony kokoa noho ny fombafomba tsy misy fihatsarambelatsihy.
Ny faharoa lehibe hahatakatra avy amin'ny tanteraka fanadihadiana fahadisoana sehatra, izay mandamina be ny amin'ity toko ity, dia ny hoe misy roa loharanom-fahadisoana: olana mifandray amin'ny hoe iza ianao miresaka (solontena) sy ny olana mifandray amin'ny zavatra nianaranao avy amin'ireo resaka (fandrefesana ). Azonao atao, ohatra, ny mieritreritra ny fisainana momba ny tsiambaratelo an-tserasera amin'ny olon-dehibe any Frantsa. Ny fanaovana ireo tombatombana ireo dia mitaky karazany roa samy hafa. Voalohany, avy amin'ireo valinteny omen'ireo namaly, dia tokony hanova ny toetrany momba ny tsiambaratelo an-tserasera (izay olana momba ny fandrefesana). Faharoa, avy amin'ny fihetsika nasehon'ireo namaly dia tokony hanova ny toe-tsain'ny vahoaka manontolo (izay olana amin'ny fisoloana tena). Ny famintinana tanteraka amin'ny fanontaniana fanadihadiana ratsy dia hamoaka tombantombana ratsy, toy ny fanararaotam-po amin'ny fanontaniana fametrahana fanontaniana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny tombantombana tsara dia mitaky fomba fijery mazava sy miseho. Raha jerena ny zava-misy, dia hamerina hijery ny fomba fijerin'ny mpikaroka ny fanadihadiana sy ny fandrefesana tamin'ny lasa aho. Avy eo, hasehoko ny fomba fijerin'ny fanadihadiana sy ny famerana ny fikarohana momba ny fanadihadiana nomerika.